DF oo ka Codsatay Koonfur Afrika Inay damaanad qaado badqabka Ganacsatada Soomaalida iyo hantidooda. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / DF oo ka Codsatay Koonfur Afrika Inay damaanad qaado badqabka Ganacsatada Soomaalida iyo hantidooda.
DF oo ka Codsatay Koonfur Afrika Inay damaanad qaado badqabka Ganacsatada Soomaalida iyo hantidooda.
September 5, 2019 - By: Omar Akhyaar
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay waxay ka kaga hadashay rabshadaha ajnebi nacayka ah ee ka dhacaya dalka Koonfur afrika.
Qoraalkan oo ay soo saartay wasaaradda warfaafinta federaalka ayaa u qornaa sidatan:
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay maalmahan ishaa ku haysa
rabshadaha ka dhacaya dalka South Africa oo ay ku noolyihiin muwadiniin Soomaaliyeed oo u badan ganacsato kuwaasoo weeraro lagu qaaday sanooyinkii lasoo dhaafay iyo rabshadaha hada dhacayaba ay kasoo gaadheen waxyeelo nafeed iyo mid hantiyeed.
Dowlada Soomaaliya waxay ka xuntahay falalka boobka iyo barakicinta ah ee loo gaysanayo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo ganacsigooda, waxayna ka codsanaysaa dowlada South Africa inay ilaaliso oo ay damaanad qaado badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo hantidooda.
Ugu danbayn, dowladda Soomaaliya waxay muwaadiniinteeda deggan dalka South Africa ugu baaqaysaa in ay feejignaan iyo taxadar dheeri ah muujiyaan hadba wixii soo kordhana lawadaagaan safaaradda Soomaaliya dalka South Afrika